Bụ 2018 Afọ Retail nwụrụ? Nke a bụ otu esi echekwa ya | Martech Zone
Umuaka na umuaka no na obi wutere ha ọdịda nke Tomụaka 'R' Anyị, otu ụlọ ọrụ siri ike na ụlọ ahịa ahịa ikpeazụ fọdụrụ nke lekwasịrị anya naanị na ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Nkwupụta mmechi ụlọ ahịa wepụrụ olileanya niile na nnukwu ụlọ ahịa - ebe agụụ na-agụ ndị nne na nna, alaeze dị ịtụnanya maka ụmụaka - nwere ike ịzọpụta.
Ihe dị mwute karịa bụ na ysmụaka 'R' Anyị gaara azọpụta.
Tlọ ahịa nnukwu ụlọ a na-egwuri egwu nwere ọtụtụ ọnyà mkpọrọ, ọ bụghị naanị ya. Cushman & Wakefield na-eme atụmatụ na US imechi ụlọ ahịa ga-ebili 33% na 2018, na-ewepụ ihe karịrị ụlọ 12,000
N'etiti ọnwụ nke RadioShack, ọdịda nke JCPenney na mbibi nke ọtụtụ ndị ọzọ, ndị ahịa na-arịa ọrịa imechi ụlọ ahịa! ihe ịrịba ama na isi okwu. Na Sears, Claire's na Foot Locker dị njikere iwepụtakwu ihe, ihe anaghị adị mma maka ndị na-ere brik na-ngwa agha.
N'iburu ọnọdụ a, ọ nwere ike ịnwa ịnwa ịkpọ ụda egwu Don McLean, mgbe ị na-abụ abụ, 2018 bu afọ mkpọsa ahụ nwụrụ! Ma adala ụda ugbu a. Enwere olile anya maka ndị na-ere ahịa dị njikere imeghari ma nabata ọtụtụ mgbanwe ndị mepụtara site na ahụmịhe ndị ahịa.
Lanahụ Nke Kachasị Mma
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-alụ ọgụ iji merie Mmetụta Amazon (n'etiti ihe ndị ọzọ), mana oge eruola ka nke ahụ gbanwee. Ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ntụpọ ahụ egosila na ọ bụ nnukwu onye mmegide maka ụlọ ahịa ọdịnala, ọ nweghị ihe kpatara ndị na-ere ahịa enweghị ike ịghọta ezigbo ikike ha.
Iji merie ụfọdụ nsogbu ịma aka nke nnukwu mkpọsa ahụ, ndị na-egwu brik na ngwa agha ga-adị nkwado iji bulie ohere dị na ụlọ ahịa, na-ere ma na-akwalite ngwongwo, jupụta ọdịiche dị n'etiti dijitalụ na nke anụ ahụ, nke na-emewanye uru ma meziwanye ahụmịhe ndị ahịa ha.
Obere akpa na-acho
Nsogbu a kpochapụla ugboro ugboro na-amasị ihe egwuregwu ụmụaka 'R' Us na Sports Authority. Ọmụmaatụ: ị ​​chetụla ihe kpatara i jiri zụọ ahịa na Toys 'R' Us?
Okenye gara ebe ịzụta onyinye (“Demand”). The obere akpa, Otú ọ dị, bụ otu ma ọ bụ karịa ogo iche site na mbido nke ina. Obere akpa enweghị ọchịchọ ịbanye n'ụlọ ahịa - ọ bụ ọrụ.
Ndị ahịa na-ahụ maka egwuregwu na-echekwa nsogbu yiri nke ahụ, ebe ndị ahịa na-azụkarị ahịa iji kwadebe maka oge egwuregwu ọhụrụ. Mgbe ahụ ha hụrụ ọnụ ahịa na-arị elu ma siere ya ike ịga n'ihu.
Enwere ọnọdụ ọzọ - otu ebe ndị nne na nna na-agwụ ike chọrọ igbu oge na ụmụ ha. Mgbe ịbanye na ụlọ ahịa abụọ ahụ, obere akpa ahụ enweghị atụmatụ ọ bụla akọwapụtara iji ego. Ndị nne na nna na-etinye ihe egwu a na agbanyeghị, na-enwe olile anya na ha nwere ike ịba na ụzọ dị ọnụ ala.
Ezinụlọ ndị na-atụ anya ya bụ ma e wezụga. Ndị nne na nna ọhụrụ ("Wallet") nwere obi ụtọ ịzụta ihe niile ha chọrọ. Nwa ọhụrụ ahụ na-enwu gbaa nwere oke ọ nwere, agbanyeghị, ya mere atụla anya na mkpali nke splurge ga-adịgide ogologo oge mgbe:
Agafeela mmefu ego na nke ugboro anọ
Nwa amụrụ ọhụrụ bịara
Nwa nke abuo abia
Ndị na-ere ahịa na-ahapụkarị ohere iji jikọọ obere akpa na-achọ ihe. Ọ bụ ezie na enwere oge mgbe ọ nwere ike iyi ka ọ dị mfe (nke bụ: ezinụlọ ndị na-atụ anya ya), ọ ga-ekwe omume iweta Wallet na Demand nso site na:
Inye ndị ahịa ndepụta doro anya ma dịkwa nkenke nke ngwaahịa niile dị na ụlọ ahịa
Kọwa ebe ngwaahịa ndị ahụ dị
Itinye ngwa ndị nwere ike inyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa n'ụzọ dị mma karị, dị ka maapụ ma ọ bụ ndepụta ịzụ ahịa dijitalụ
Ighapu uzo ulo ahia ka mma ahịa nke ụlọ ahịa
Emejuputa atumatu ihe omume dika izu ahia na ntanetị
N'ikpeazụ, mgbe ị nwere onye ahịa nke ụlọ ahịa ndị gbawara agbawa na-adịghị ada, ha ga-eyigharịrị ma zụrụ ihe ha zụrụ.
Mgbanwe mgbanwe dijitalụ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na atụmatụ dị n'ime. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa X chere na ọ bụ ezigbo echiche - ndị ahịa chere na ọ bụ ezigbo echiche! Ha kwalite mgbanwe nke mpụga, ọdịbendị.
E nyere Toys 'R' Us na Sports Authority ohere ịnabata mgbanwe dijitalụ ma nwekwuo ike na obodo ndị ha na-azụ ahịa. Ha mechara daa, ma nsonaazụ ya nwere ike ịdị iche.
Egwuregwu Authority: Dịka nne ma ọ bụ nna, achọrọ m ịga na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, kwupụta egwuregwu nke nwa m, otu na otu, ma nata cornucopia nke ndụmọdụ maka ihe ndị dịnụ.
Mụaka 'R' Anyị: Ugbu a bụ ohere iji mepụta ngwa ebe ụmụaka nwere ike ịchọgharị na egwuregwu ọ bụla, wuo ndepụta chọrọ, wee nyefee ya n'aka mama na papa maka nzacha na ịkekọrịta (site na email, mgbasa ozi mmekọrịta, wdg). Ọ nwere ike ị nweta azịza ịzụ ahịa dị mfe - ma na-egbuke egbuke maka ụbọchị ọmụmụ, ezumike na oge ndị ọzọ pụrụ iche.
Staples / /lọ Ahịa Office Ndị Ọzọ: Cheedị ndepụta nke ụlọ akwụkwọ niile dị mkpa na -emepụta na-akpaghị aka mgbe ekwusịrị ndepụta nwa na klas. Iji nnweta ụlọ ahịa, atụmatụ a ga-aba nnukwu uru nye ndị nne na nna nọ n'ọrụ.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa achọpụtabeghị mkpa ọ dị na gburugburu ụlọ ahịa ahụ, mana ọ bụ ihe nile nye ndị ahịa. Mgbe ụlọ ahịa dị ochie, nke nwere nkụja, ahaghị nke ọma, nke siri ike ịnyagharị na ndị na - enweghị oke ọrụ, ndị ahịa ga - aga ebe ọzọ, ebe ha ka na - achọ ahụmịhe ịzụ ahịa pụrụ iche, na - enweghị - - nke a bụ ebe onye na - ere ahịa ọdịnala. nwere ike zipu
Iji meghee ọnụ ụzọ ha, ndị na-ere ahịa kwesịrị ichegharị echiche nke mbụ nke ụlọ brik na ngwa agha. Site na ịbawanye ohere na ụlọ ahịa, ịnwe obere akpa ha na-achọ, ịghọta ndị na-azụ ha, na ibelata ọdịiche dị n'etiti dijitalụ na nke anụ ahụ, ndị na-ere ahịa agaghị echegbu onwe ha gbasara ndị dike e-commerce, ma ọ bụ imechi ọnụ ụzọ ha - n'ihi na ha ga-abawanye uru ma melite ahụmịhe ndị ahịa.
Tags: Ihe ClaireCushman na Wakefieldntinye dijitalụmgbanwe ntanetịIhe mkpuchi ụkwụjc penneyjcpenneymallsụlọ ahịa na-eweta ụlọ ahịamgbochi redioretailMgbasa ozi ohuruụlọ ahịa ịzụ ahịasearsikike egwuregwustaplesihe egwuregwu ụmụaka r